Dowladda Imaaraadka oo Dhaawacyo kala duwan maanta u qaaday Dalka Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Imaaraadka oo Dhaawacyo kala duwan maanta u qaaday Dalka Kenya
Dowladda Imaaraadka oo Dhaawacyo kala duwan maanta u qaaday Dalka Kenya
Muqdisho (SONNA), 9 qof oo dhaawcayo kala duwan qaba oo dalka gudahiisa wax looga qaban waayey ayaa Dowladda Imaaraadka carabta, waxey maanta u qaaday dalka Kenya, si halkaasi waxa looga qabto xaladooda caafimaad, iyaggoo ay wehlinayaan qaar ka mid ah Ehaladooda.
Dhaawacyadan loo qaaday dalka Kenya, ayaa isugu jiray kuwa uu sameeyey Musiibadii qaran ee 14 bishi ocotober ka dhacday Ex Z oobe iyo dad ku soo wax yeloobay Gobalada dalka, kuwaasi oo xaaladooda caafimad waxa looga qaban wayaay Dalka.
Ugu horeyn ,ayaa waxa madasha ka hadlay wasiirka Wasaaradda Warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Eng C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisow, isagoona ugu mahad celiyey taageerida Dowladda Imaaraadka carabta ay mar walibo siiso Soomaaliya.
Safiirka Dowlada Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya, Danjire Maxamed Axmed Cusmaan Alxamaadi oo isna madasha ka hadlay, ayaa shegaay iney mar walibo diyaar uu yahiin iney caawiyaan dadka Soomaaliyed ee dhibaateysan.
Wasiirka Wasaraadda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur oo ka hadashay halkaasi, ayaa sheegtay iney in Dolwadda Imaaraadka ay yahiin kuwa mar walibo caawiyo dadka dhibateysan, iyaddoo ugu mahad celisay taageerida ay siiyaan Soomaaliya.
Previous articleGuddiga Gurmad Qaran oo sheegay inay soo gabagabeeyeen Wajiga koowaad ee gurmadka dadkii lagu Xasuuqay KM5